【Mandarin Morning - Chinese paunonoongororwa kuda Confucius Institution】: HSK bvunzo nzvimbo dzakakodzera paunonoongororwa Code: 8980901
Confucius Institute makuru Mabasa ndiwo: asangana pose nenzanga expatriates kudzidzisa Chinese mutauro; vachidzidzisa Chinese vadzidzisi mutauro; Chinese mudzidzisi mutauro advertising bvunzo uye Chinese mabhizimisi; muvatsvakire Chinese dzidzo, tsika, zveupfumi mashoko kubvunza; kuti aite kutsvakurudza Contemporary China.
【Mandarin Morning-Hanban "International Chinese Vadzidzisi Certificate" advertising bvunzo inodzidzisirwa】: bvunzo site Code: 8980950
Hanban ndiyo tsika vasiyana Chinese Ministry of Education, chaitwa kupa nyika Chinese mutauro uye tsika nedzidziso zviwanikwa nerubatsiro kugutsa zvinodiwa mhiri kwemakungwa Chinese vadzidzi, nokuti vadyi kukura kusiyana kwetsika uye kubatsira pakuvaka zvinopindirana nyika.
【Mandarin Morning, ndiye International Education Practice muzinda Tianhua Institute of Shanghai Normal University】